January 7, 2021 - Khitalin Media
အမျိုးသားတွေကို အစွဲလန်းကြီးစွဲလန်းစေတတ်တဲ့ မိန်းမသားတို့၏ အရည်အချင်းများ
January 7, 2021 by Khitalin Media
အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို ရုပ်ကလေးတစ်ခုလောက် ကွက်ပြီး သဘောကျတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြာခြင်းမရှိတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ ရုပ်ဝါဒကို အခြေမခံဘဲ သူတို့ သဘောကျတဲ့ အမူအယာလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ပြီဆိုရင်လည်း ချစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ Aunty May ရဲ့ ပရိသတ် ကောင်မလေးတွေ သိထားသင့်ပါတယ်။ (၁) အဝတ်အစား အဝတ်အစားကိစ္စရပ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ အထူးပြောဖို့ လိုမယ်တော့ မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောစရာလေးတွေကလည်း ရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်ဝတ်ချင်တာကို ကိုယ်ဝတ်တာထက်စာရင် ကိုယ်နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ ကောင်လေး ဘယ်လိုအဝတ် အစားမျိုး သဘောကျသလဲဆိုတာကို သိပြီး အဝတ်အစားစတိုင်ကို ပြောင်းလဲကြည့်လိုက်ပါ။ အလိုလို ချစ်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက ရာသီဥတု၊ ခေတ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အဝတ်အစားမျိုးကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ (၂) ကိုယ်သင်းရနံ့ … Read more
ရနှေေး ထဲ ဂငျြးထညျ့ပွီး အိပျ ခါနီးတိုငျး သောကျပေး ရငျ ရရှိလာ မယျ့ အံ့မခနျး အကြိုးကြေးဇူးမြား…
ရနှေေး ထဲ ဂငျြးထညျ့ပွီး အိပျ ခါနီးတိုငျး သောကျပေး ရငျ ရရှိလာ မယျ့ အံ့မခနျး အကြိုးကြေးဇူးမြား… ဂငျြးမှာ သတ်တုဓာတျကွှယျဝစှာ ပါဝငျပါတယျ။ ပိုတကျဆီမယျ၊ မဂ်ဂနီဆီယမျ၊ ကော့ပါးသတ်တုတှေ ပါဝငျတာကွောငျ့ နစေ့ဉျ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ ဓာတျစာတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ ည အိပျရာဝငျခါနီးတိုငျး ရနှေေးထဲ ဂငျြးထညျ့ပွီး သောကျပေးလိုကျရငျ ရရှိလာမယျ့ အံ့မခနျး အကြိုးကြေးဇူးတှကေို ဖျောပွ ပေးလိုကျပါတယျနျော…. (၁) မူးမျောခွငျး ကငျးဝေးစမေယျ သတ်တုဓာတျနဲ့ ဗီတာမငျတှေ ကွှယျဝစှာ ပါဝငျတာကွောငျ့ မူးမျောခွငျးတှေ၊ ခေါငျးနောကျတာတှကေို ကငျးဝေးစပေါတယျ။ ဂငျြးကို ဆေးအဖွဈနဲ့ သုံးစှဲလာတဲ့ ခတျေအဆကျဆကျ မှတျတမျးတှအေရ ခေါငျးမူးတာတှေ၊ အနျခငျြတာတှကေို သကျသာ ပြောကျကငျးစတောပွီး ကိုယျဝနျဆောငျတှမှော ဖွဈတတျတဲ့ ပြို့အနျတာတှကေို … Read more
လူမမြင်နိုင်ပေမဲ့ အတွင်းသား အသားအရေ ဖြူဝင်းစေဖို့ လိမ္မော်ရည်နဲ့ နနွင်းမှုန့်
နနွင်း ဟာ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အသားအရေ ကို ဖြူဝင်းစေတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တစ်ခုပါ။လိမ္မော်သီးမှာလည်း ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင် Citric အက်ဆစ်ဓါတ်တွေပါဝင်လို့ အသားအရေကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပြီး ဖြူဝင်းစေပါတယ်။ အတွင်းသားအသားအရေပျက်ဆီးတာဟာ လူမမြင်ရဘူးဆိုပေမဲ့လည်း ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အသားအရေကို အကောင်းဆုံးဂရုစိုက်ချင်ကြတာဖြစ်လို့ အတွင်းသားအသားအရေ ညိုမဲနေတာတွေဟာ တကယ့်ပြဿနာအကြီးကြီးပါပဲ။ မြန်မာပြည် မှာတော့ သိပ်မဝတ်ကြပေမဲ့ ကမ်းခြေတွေသွားတဲ့အခါ Bikini လှလှလေးတွေကို မိန်းကလေးတိုင်း ဝတ်ဖူးချင်ကြမှာပါနော်။ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ကြား ၊ လည်ပင်းနား က ညိုမဲနေတာတွေ သက်သာစေဖို့ အခုပဲ အသုံးပြုလိုက်ရအောင်ပါ။ ပြုလုပ်နည်း လိမ္မော်ရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းနဲ့ နနွင်းမှုန့် လကဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်ကို ရောပြီး သေချာမွှေပေးပါ။ ပြီးရင် ညိုမဲနေတဲ့ … Read more
ဆားဝက်ခြံ အတွက် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်း ၂ ခု
(၁) ခရမ်းချဉ်သီး နဲ့ ကုနည်း သေးငယ်သော ခရမ်းချဉ်သီး တစ်လုံးယူပါ။ ပြီးရင် အခွံလွှာပါ။ အခွံလွှာပြီးသော ခရမ်းချဉ်သီးကို ခပ်ပါးပါးလေးလှီးပြီး ညအိပ်ယာမဝင်ခင် ဆားဝက် ခြံ ရှိတဲ့ နေရာကို အုပ်ထားပေးပါ။ မနက်အိပ်ယာ နိုးတဲ့ အခါမှာ ရေစင်အောင် ဆေးကြောပေးပါ။ (၂) သံပုရာသီး နဲ့ ကုနည်း သုံပုရာသီ တစ်လုံးကို အရည်အနည်းငယ် ညစ်ပြီး ခွက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။ ပြီးရင် ဆားအနည်းငယ်နှင့် ခွက်ထဲမှာ ရောမွှေလိုက်ပါ။ မသုပ်လိမ်းခင်မှ မျက်နှာကို ခပ်နွေးနွေးရေနှင့် စင်ကြယ်အောင်အရင် ဆေးပါ။ ပြီးနောက် မျက်နှာကို သုပ်လိမ်းလိုက်ပါ။ မိနစ် ၂၀ အကြာတွင် ခပ်နွေးနွေးရေနှင့် ဆေးကြောလိုက်ပါ။ သုံပုရာသီးဟာ မျက်နှာပေါ်တွင် အရေပြားတွေကို ထိခိုက်စေလို့ အလွန်အကျွံထည့်ခြင်း၊ … Read more
ပေါင်ခြံမည်းခြင်း ၊ ဟိုကြားဒီကြားမည်းခြင်းတို့ကို အထိရောက်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
လူမြင်မခံဝံ့သောနေရာများ ၊ ပေါင်ခြံ ၊ ချိုင်း ၊ ရင်သားထိပ်သီး ၊ စတဲ့ အရေပြားနေရာတွေဟာ အခြား နေရာတွေထက်စာလျှင် ပိုပြီး ညိုမည်းလေ့ ရှိကြပါတယ် ။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းဟာ အမွှေးရိတ်ခြင်း တစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ထိုအရေပြားနေရာတဝိုက် အောက်ဆီဂျင်မရခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း ၊ စိုစွတ်မှုများခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ၊ ချွေးထွက်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ၊တင်းကျပ်သော အတွင်းခံများကြောင့်လည်းကောင်း ၊ အရေပြားပွတ်တိုက်မှုကြောင့် လည်းကောင်း ၊ အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းကောင်း ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ဒီလို ညိုမည်းလေ့ ရှိကြပါတယ် ။ မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဒီလိုညိုမည်းနေခြင်းကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ် ။ ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင် ပြန်လည်ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ ၁။သံပုသီး သံပုယိုသီးကို … Read more
မိခင်ရဲ့ လွဲမှားတဲ့ အချစ်ကြောင့် ၈ နှစ်သမီးလေးအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရ
အသက် ၈ နှစ်အရွယ် သမီးလေးဟာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အချစ်ပိုကာ လွဲမှားစွာနဲ့ ဂရုစိုက်မှုလွန်ကဲတာကြောင့် အစာအိမ်ထဲမှာ ပြည်တည်နာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးဟာ ဗိုက်အောင့်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားနေရတာ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အခြေအနေပိုဆိုးလာတာကြောင့် ဆေးရုံပြခဲ့ရာ ကလေးရဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာ မိခင်ထံကနေ ကူးစက်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် အစာအိမ်ပြည်တည်နေတာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအပြုမှုမျိုးဟာ အာရှတိုက်က မိခင်တွေ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်က မိခင်တွေ အများဆုံး လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်မိပြီး လုပ်လိုက်တဲ့ အပြုအမူက အခန့်မသင့်တဲ့အခါ ကလေးအတွက် အသက်အန္တရာယ်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဟန်ကျိုးပြည်နယ်က ‘ရှောင်းမေ’ ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးဟာ အသက် ၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု အရှိန်ရနေတဲ့ ဒီအရွယ်မျိုးမှာ ကလေးက အစားအရမ်းစားပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် အသားကို … Read more
ဒီလိုအမေလည်း ရှိသေးတာလား.. အွန်လိုင်းမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ ကလေးအမေ ရုပ်သံ…
အှနျလိုငျးမှာဝဖေနျမှုတှမွေငျ့တကျနတေဲ့ ကလေးအမေ ရုပျသံ ဒီဗှီယိုဖိုငျကတော့ ထိုငျးနိုငျငံက ဗှီယိုဖိုငျတဈခုဖွဈပီး ကလေးငယျကိုရိုကျနှကျနတောဖွဈပါတယျ။ ကလေးငယျမှ သညျးထနျစှာငိုကွှေးနတောကို မိဘဖွဈသူမှ ဒေါသမြားဖွငျ့ မတျောတရျောတှကေို လှနျပွတာဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့သားသမီး မလိမ်မာတာ အခြိုးမကတြာရှိရငျ ဆုံးမကွရမှာ မိဘတှေ တာဝနျဖွဈပါတယျ။ သို့သျောလညျး ဆုံးမတတျဖို့တော့လိုပါသညျ။ ဆုံးမနညျးမမှနျကနျပါက ကလေးငယျတှမှော စိတျဒဏျရာရကာ လူတောမတိုးဖွဈတတျသလို ထုံထိုငျးသှားတတျသလို အခွားတဈဖကျမှာလညျး အငျမတနျရိုငျးစိုငျးခကျထနျသှားတတျပါတယျ။ အခုလို နုငယျတဲ့အရှယျလေးတှကေို ရိုကျနှကျဆုံးမခွငျးထကျ နားလညျအောငျ ခြော့မော့ပွောဆိုခွငျးက ပိုထိရောကျမယျထငျပါတယျ။ မိသားစု တဈစုမှသညျ နိုငျငံတဈနိုငျငံထိ အနာဂတျဟာ လူငယျလေးတှအေပျေါမူတညျပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ လူငယျလေးတှကေို ထိမျးသိမျးစောငျ့ရှောကျတဲ့ မိဘတှမှော ပိုမိုပီးတာဝနျရှိပါတယျ။ မညျသို့ပငျဖွဈပါစေ ဒီဗှီယိုထဲကလို ကလေးငယျလေးတှအေပျေါ မလုပျကွဖို့တိုကျတှနျးရငျး သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစဗြော။ ဆွာဟုနျး အွန်လိုင်းမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ ကလေးအမေ ရုပ်သံ ဒီဗွီယိုဖိုင်ကတော့ … Read more
အိန္ဒိယသူတွေ အသုံးပြုတဲ့ ဆံပင်အရှည်မြန်နည်း လျှို့ဝှက်ချက် (၄)မျိုး
အိန္ဒိယသူတွေအများစုဟာ ဆံပင်သန်စွမ်းမည်းနက်ပြီး ဆံသားကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံတာကို ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တွေ့မြင်ဖူးကြမှာပါ ပျိုမေတို့ရေ။ အခုပြောပြပေးချင်တာကတော့ အိန္ဒိယသူတွေ အသုံးပြုကြတဲ့ ဆံပင်အရှည်မြန်နည်း လျှို့ဝှက်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပတ် ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်လ်ဟာ အသားအရေ အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက ဆံကေသာ အလှအပအတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတမျိုးပါ ပျိုမေတို့ရေ။ ခေါင်းမလျှော်ခင် နာရီဝက်လောက်အလိုမှာ ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်ကရတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်လ်ကို ဆံကေသာအရင်းကနေ အဖျားအထိ နှံ့စပ်အောင်လိမ်းပေးပြီးမှ လျှော်ခြင်းက ဆံသားအရှည်မြန်ခြင်းကို ကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ကြက်ဥအနှစ် ကြက်ဥအနှစ်ဟာ ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားတွေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် ဆံပင်အရှည်မြန်ခြင်းကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေတာကြောင့် ခေါင်းမလျှော်ခင် ကြက်ဥအနှစ်နဲ့ ဆံသားကို ပေါင်းတင်ပေးသင့်ပါတယ်။ (၃) အုန်းဆီ အုန်းဆီဟာဆိုရင်တော့ အိန္ဒိယရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးတွေမှာသာမက အလှအပရေးရာတွေမှာပါ အသုံးပြုကြတဲ့ သဘာဝအဆီတမျိုးပါ။ အိန္ဒိယသူတွေ … Read more
ရုပ်ရည်က အရေးကြီးသလားလို့ ချစ်သူရှာချင်တဲ့အမျိုးသားတွေက မေးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခွန်းတည်းပြောရရင်တော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ထက်အရပ်ပုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့တွဲသွားတာကို စာဖတ်သူ ဘယ်နှကြိမ်လောက် မြင်ဖူးသလဲ။ တွေ့လေ့တွေ့ထရှိတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။ သည်လိုပြောလို့ ရုပ်ရည်ရူပကာက လုံးဝအရေးမကြီးဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ရုပ်ရည်ချောမောလို့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို နည်းနည်းလောက် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ သည်လောက်ပါပဲ။ ရုပ်မချောလို့ မိန်းကလေးတွေစိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ရုပ်ရည်ဟာ အမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ အဓိကမကျရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ၁. အမျိုးသမီးတွေဟာ အဆင့်အတန်းတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ အဆင့်အတန်းဆိုလို့ အပျံစားကားကြီး စီးနိုင်တာ၊ နာမည်ကြီးတာတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆင့်အတန်းဆိုတာ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အဆင့်အတန်းမြင့်မှုကို ဆိုလိုတာပါ။ လူမှုရေးအဆင့်မြင့်တဲ့အမျိုးသားတွေကို အမျိုးသမီးတွေက အလိုလိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်အရှိဆုံးသူတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေ စိတ်အ၀င်စားဆုံးသူတွေပါပဲ။ ၂. အမျိုးသားတွေဟာ သူတို့ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းကို … Read more
ခွခြေောငျးလေးတှေ တဈခုခငျြးဆီက ပွောပွနတေဲ့ သငျ့ရဲ့ စိတျနသေဘောထားလေးတှေ
ခြေချောင်းလေးတွေ တစ်ခုချင်းဆီက ပြောတဲ့ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားလေးတွေကို နည်းနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ခြေမ ခြေမက တခြားခြေချောင်းတွေထက် ပိုရှည်နေရင် သင်တာ တော်တယ်၊ ဥာဏ်ကောင်းတယ်၊ တီထွင်းမှုစွမ်းရည်ကောင်းတယ်။ဒါ့ကြောင့် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ တစ်ခုခုဆို အာရုံစိုက်နေဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် သင့်လုပ်ရမယ့်အရာ မပြီးမချင်း သင်မနားတမ်းလုပ်လေ့ရှိတတ်တယ်။ခြေမက တခြားခြေချောင်းတွေထက် ပိုသေးနေရင်တော့ သင်ဟာ စွယ်စုံရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်ကြီးအတိုင်းပဲ လုပ်တတ်တဲ့သူပါ ၂။ ခြေညိုး သင့်ရဲ့ ခြေညိုးလေးက တခြားခြေချောင်းလေးတွေထက် ပိုရှည်နေရင် သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရည်အချင်းရှိတယ်။လူတွေကို စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်ရာမှာ တော်တယ်။ လုံ့လရှိတယ်။ ၀ိရိယရှိတယ်။ သင်ယုံကြည်တဲ့အရာအပေါ် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်တယ်။ သင့်ရဲ့ ခြေချောင်းက တခြားခြေချောင်းလေးတွေထက် ပိုတိုနေရင်တော့ သင်ဟာ သင့်ကိုယ်တင် … Read more